विहानैदेखि त्रिभुवन विमानस्थल एकाएक ठप्प, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
विहानैदेखि त्रिभुवन विमानस्थल एकाएक ठप्प, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । बंगालको खाडीबाट शुरु भएर भारतको उडिसा राज्यमा वितण्डा मच्चाइरहेको चक्रावत फानीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ ।
चक्रवात फानीका कारण शुक्रबार बिहानैदेखि काठमाडौंलगायत देशभरको मौसम परिवर्तन भएको छ । मौसममा आएको परिवर्तनका कारण शुक्रबार विहानदेखि आन्तरिक तर्फका सबै हवाई उडान रद्द भएका छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रियतर्फका उडान भने जारी छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीले मौसममा आएको खराबीका कारण विहान १० बजेदेखि आन्तरिक तर्फका सबै उडान बन्द गरिएको जानकारी दिए ।
‘तत्कालै मौसममा सुधार आउने संभावना नरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ महाप्रवन्धक क्षेत्रीले भने, ‘मौसम खराब भएकाले आन्तरिक तर्फका सबै उडान विहान १० बजेदेखि बन्द छन् ।’
त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा उच्च हिमपान हुने संभावना रहेको भन्दै सरकारले शनिबार र शुक्रबार हेलिकोप्टर नउडाउन अनुरोध गरेको छ ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आपातकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले देशको पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात हुने संभावना रहेकाले हेलिकोप्टर नउडाउन भनेको हो ।
महाशाखाका अनुसार चक्रावत फानीकै कारण शुक्रबार र शनिबार देशभरको मौसम परिवर्तन हुने र देशका अधिकांश ठाउँमा हावाहुरी चल्ने संभावना छ । गृह मन्त्रालयले पर्यटकहरुलाई समेत सुरक्षित ठाउँमा रहन अनुरोध गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले चक्रावत फानीले पार्ने संभावित असरलाई मध्यनजगर गरी आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
पूर्बी हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात हुन सक्ने हुँदा सो क्षेत्रमा अहिले देखिनै भोलि दिनभरसम्म हेलिकप्टर उडान नगर्न नगराउनुहुन र पर्यटक एवं यात्रुहरूले सुरक्षित स्थानमा रहनु हुन अनुरोध छ ।
केहिबेरमा काठमाडौंसहित देशभर हावाहुरी चल्ने, सचेत रहन आग्रह
फानी नाम गरेको समुन्द्री आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ । फानीकै कारण केहिबेरपछि काठमाडौंसहित देशभर हावाहुरी चल्ने मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
‘हामीले धेरै अघिदेखि भरिहेका छौं । यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबै आआफ्नो रुपमा सचेत हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा मानिसले धेरै सचेतना अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । सकेसम्म हिमाल आरोहण गर्ने व्यक्तिहरु तल र सुरक्षित ठाउँमा बस्नु राम्रो हुनेछ ।’
उनले समुन्द्री आँधी जमिनमा पुग्नेवित्तिकै प्रभाव कम पर्ने भएकाले नेपालमा ठूलो असर नगर्ने अनुमान गरिएको बताइन् । यसको प्रभाव आज (शुक्रबार) र भोलि (शनिबार)सम्म हुने उनले बताइन् ।
‘अब केहीबेरमा काठमाडौंसहित देशभर हावाहुरी चल्न थाल्नेछ । यसबाट सबै सचेत हुनुहोस्,’ पोखरेलले भनिन्, ‘हावाहुरीबाट बच्न चाल्नुपर्ने सतर्कताका बारेमा सबै एलट हुनु आवश्यक छ ।’
फानी भारतको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेको मौसमविदहरुले बताएका छन् । यसबाट हुने क्षति कमगर्न प्रभावित क्षेत्र अर्थात समुन्द्र किनारमा रहेका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । भारतको आन्द्रप्रदेश र तामिलनाडुमा उच्च सर्तकता अपनाइएको छ । यो आँधीबाट आठ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
समुन्द्री आँधी हाल बंगलादेशको खाडीबाट झण्डै दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा भारतको उडिसातर्फ बढिरहेको मौसमविदहरुले बताएका छन् ।
यस्तै पाँच नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ जिल्लामा बिहानैदेखि हुरी बतास चलेको छ । हुरीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ । त्यसैक्रममा चट्याङ्ग लागेर वडा सदस्यसहित २ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार हावाहुरी र चट्याङले दाङको विभिन्न स्थानहरुमा क्षति पुर्याएको बताएको छ यसैगरि नवलपरासीमा चट्याङ लागेर वडा सदस्यसहित दुई जना घाईते भएका छन् ।
भीषण हावाहुरी तथा वर्षाको समयमा खेतमा काम गर्न गएकी प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं ६ की महिला वडा सदस्य सहिदुन निशा गम्भिर घाइते भएकी छिन् भने उनको छोरा भुलई अन्सारी समान्य घाइते भएका छन् । स्थानियको अनुसार गम्भीर घाइते भएकी निशालाई उपचारको लागि भारत पठाइएको छ
के हो फानी ?
फानी एक प्रकारको हावाहुरी हो । उष्णकटिबन्धिय हावाहुरीको एक प्रकार फानी हो । जस्तै हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन जस्तै फानी पनि एक उष्णकटिबन्धीय चक्रवाता(हावाहुरी) को प्रकार हो ।
विश्वका अलग अलग स्थानमा हावाहुरीको अलग अलग नाम राखिएको हुन्छ । तर यो जरुरी छैन कि हरेक हावाहुरीको नाम राखियोस् । हावाहुरीको नाम राख्ने प्रचलन सन् १९५३ बाट आधिकारिक रुपमा शुरु भएको थियो । यसको एक प्रकृया रहेको छ । यो नाम संयुक्त राष्ट्र संघको वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेशन द्वारा बनाइएको नियम अनुसार राखिन्छ ।
कस्तो आँधी वा हावाहुरीको नाम राखिन्छ ? फानीको अर्थ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार त्यस्तो आँधी वा हावाहुरीको नाम राखिन्छ जसको गती ६३ किलोमिटर प्रतिघन्टा हुन्छ । यस्तोमा जव यो हुरीको रफ्तार ११८ किलोमिटर प्रतिघन्टा सम्म हुन्छ त्यतिबेला यस्तो हुरीलाई गम्भीर प्रकृतिको हावाहुरीको श्रेणीमा राखिन्छ ।
यस्तै २२१ किलोमिटर प्रतिघन्टाको रफ्तारमा आउने हावाहुरीको नाम चक्रवाती हावाहुरी दिइएको छ । हिन्द महासागमा उठेको यो हुरीलाई बंगलादेशले फानी नामाकरण गरेको थियो । बंगलादेशमा फानीको सम्बन्ध सर्पसँग हुन्छ ।
फानीको प्रयोग विध्वंश या नोक्सानको रुपमा लिने गरिएको छ । फानीको शाब्दिक अर्थ ‘सर्पको फडा’ सँग सम्बन्धित छ ।यस्तो हावाहुरी विश्वको जुन महासागमा उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाम नजिकको राष्ट्रले राख्ने गरेका छन् ।